Armenia-Azerbaijan: Antsafa Niarahana Tamin’I Elizabeth Métraux · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Marsa 2018 17:42 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny 9 Aogositra 2009)
Ampahany tamin'ny fitateranay manokana ny Feon'ny Ady any Kaokazia ity lahatsoratra ity.
Hetsika antserasera mampiasa bilaogy sy lahatsary mba hampifandraisana ny tanora Amerikana sy Armeniana ary Azerbaijani hiara-miasa amin'ny famoronana ny fampitam-baovao tompon'andraikitra ara-tsosialy ny DOTCOM, fandaharanasa novokarin'ny PH International ary tohanan'ny Departemantam-panjakana Amerikana.
Niteraka olana mazava ho azy ny fifandonana nisy teo amin'i Armenia sy Azerbaïdjan noho ny fifandirana ny faritanin'i Nagorno Karabakh indrindra fa rehefa mifankahita amin'ireo tanora Amerikana any Etazonia ireo tanora avy amin'ireo firenena roa ireo. Niresaka momba ireo fanamby natrehany sy ny sasany tamin'ny fahombiazan'ny fandaharanasa ny Talen'ny Fandaharanasa Elizabeth Métraux.
Manana tranonkala ny DOTCOM ao amin'ny http://dotcom.ph-int.org ary vavahadim-baovao ho an'ny mpandray anjara maro amin'ireo bilaogy DOTCOM ao amin'ny http://www.netvibes.com/phdotcom#DOTCOM-Home_Page sady azonao renesina etsy ambany ny antsafa niarahana tamin'i Elizabeth Métraux izay mamahana bilaogy amin'ny tetikasa http://dotcomelizabeth.blogspot.com ihany koa .
Ampahany tamin'ny fitateranay manokana ny Feon'ny Fifandirana any Kaokazia ity lahatsoratra ity.